Ihe ndi ozo putara na Tarot Card | Rotgụ Tarot - Tarot Kaadị Pụtara
Ihe Ntuziaka Kaadị Tace nke Ace nke Pentacles
Ace nke Pentacles Tarot Isiokwu nke ọdịnaya
Ace nke Pentacles n'uzo
Ace nke Pentacle Gbanwere
Akwụkwọ akụkọ Metaphysical
Numerology Symbolism nke Ace nke Pentacle
Laghachi na Ekike nke Pentacle
Laghachi na Minor Arcana
Laghachi na Tarot Kaadị Pụtara
Kaadị tarot nke Ace nke Pentacles na-ekwupụta mmalite ọhụụ na nkwa nke ịga nke ọma n’ihe niile metụtara ịdị adị nke ihe onwunwe! Nnukwu!
Ọzọkwa, Ace nke Pentacles na-egosikwa otu esi enweta ihe ịga nke ọma a.
Dika nkpuru, nke nwere ihe omuma nile ichoro ime ka o ghari ibu okooko osisi mara mma, nkpuru na-eme nri, ma obu nkpuru osisi na-amị nkpuru, kaadi Ace nke Pentacles kwuputara ụkpụrụ ndi di nkpa maka ndu obi uto na nke oma. Dịkwa ka mkpụrụ ọ bụla ọzọ, mkpụrụ nke ahụike na ọganihu a chọrọ nlekọta ịhụnanya iji ghọta oke ike ya.
Otu n’ime ihe mmụta kachasị mkpa nke kaadị tarot Ace nke Pentacles bụ na ndụ, ọganiihu na a happinessụrị bụ onyinye Chukwu. Achọrọ ka ha nabata ma jiri ha kpọrọ ihe, ọ bụghị ịjụ ha.
Onye ọ bụla tozuru oke inweta onyinye a, tụmadị gị.
Karịsịa, Ace nke Pentacle gụnyere 'usoro mbido ngwa ngwa' nke na-eduga ndụ na-eju afọ ma na-aga nke ọma. Iwu ndị dị na ya bụ ihe eke, okwu efu, dị mfe nghọta, ma dịkwa mfe ịgbaso. Isi nzuzo nke obi ụtọ na akụnụba bụ na ọ nweghị ihe nzuzo.
Nwoke sagittarius pisces nwanyi na akwa
Akụkụ dị elu nke kaadị Ace nke Pentacles bụ agba ọcha na edo edo. White na-ese onyinyo mmụọ nsọ na Edo-edo , ime mmụọ dị ka ọ pụrụ ịghọta ya site na uche mmadụ. Yellow yikwara nke ọma yiri ọla edo, na-anọchite anya ihe ịga nke ọma nke ihe onwunwe.
Ubọk emi osiode obubịt enyọn̄ ọnọ edi enọ Abasi. Dị ka mkpụrụ ego, ọ bụ ihe ama ama ama ama nke akụ na ụba. Ihe nnọchianya nke pentacle na-akọwa otu esi enweta akụ a. Otu pentacle ji anya ya na-egosipụta nghọta mmadụ banyere eluigwe na ala. Pentagram nke e ji dee ya na-anọchite anya ya Ihe anọ ndị mmụọ nsọ na-achị.
Okooko lili a gbara ogige dị n'okpuru na-anọchi anya nsọpụrụ dị nsọ. Pathzọ na-eduga site n'ọnụ ụzọ oval, na-echetara wreath na World, maka ihe ọmụma dị elu, nke egosiri ebe a dị ka ugwu dị anya. Mgbapu nke Roses na-egosi ụkpụrụ omume ga-enye gị ohere ịga ije n'ụzọ ime mmụọ a.
Ezigbo Ace nke Pentacles Tarot Kaadị Kaadị
Ace nke Pentacle na-anọchite anya, onyinye na ohere. Ọbụna nke ka mma, ọ bụkwa usoro ntuziaka ndị bụ isi otu esi eme ihe kachasị na ohere a. Ọ bụ ezie na abamuru ya ndị na-adịte aka ga-adịte aka na-eduga ná mmezu ime mmụọ, uru ndị a na-erite na ya ozugbo bụ ọdịmma nke ihe onwunwe gị.
A sị ka e kwuwe, ọ siri ike ilekwasị anya n'echiche ndị na-adịghị adị, dị ka nzube Chineke gị na nzube nke ndụ, mgbe ụgwọ na-eri gị.
Kaadị tarot nke Ace nke Pentacles na-egosi na ụbọchị ka mma na-abịa n'ihu yana isi mmalite nke Chineke ga-emezu nke a site na ibute ihe mbụ ụzọ.
Ọkachamara n'ihe banyere akparamàgwà mmadụ bụ Abraham Maslow (1908-1970) bu ụzọ bipụta izizi ya Hierarchy of Needs na 1943. O kwuru na mkpa ụmụ mmadụ dị iche iche site na nchekwa nke ihe onwunwe na njide onwe onye na ntụgharị onwe onye na na mkpa anụ ahụ ga-ezute tupu nke ozo, enwere ike ichu ndi di nkpa. Thece nke Pentacle tarot na-anọchite anya mmezu nke mkpa a kachasị mkpa.
Ngọzi ihe onwunwe dị na kaadị tarot nke Ace nke Pentacles jikọtara ya na sistemụ bara uru dị mkpa iji chekwaa ya.
Otu ilu ndị China a ma ama kwuru, sị, 'Nye mmadụ azụ ma nye ya nri ụbọchị. Kụziere mmadụ otu esi azụ azụ ma nye onwe ya nri oge niile.
Ọ dịghị mfe ịmụ na afọ efu, agbanyeghị, ya mere, Ace nke Pentacles na-enye gị azụ na ihe ọmụma nke ịkụ azụ.
Kaadị tarot nke Ace nke Pentacles nwere ike iweta onyinye, ma nwekwaa ike iji ya mara ihe. Kama ịfụ ya na TV plasma ahụ dị elu ịchọrọ ogologo oge, ị na-ekpebi ịkwụ ụfọdụ ụgwọ gị, ma ọ bụ na ị na-ahọrọ itinye ya na akaụntụ nchekwa.
Zie ezi, kaadị tarot nke Ace nke Pentacles nwekwara ike ịkpọsa ọrụ ọhụụ na-enye gị nkwụsi ike ego zuru ezu iji lekwasị anya n'ihe mgbaru ọsọ gị na nchụso siri ike karị. Ikekwe, ọrụ ọhụrụ a na-enyekwa ohere magburu onwe ya maka ịkwaga na ụlọ ọrụ ahụ. Atụmatụ gị maka ọganiihu ogologo oge na-abịa site na ọrụ a.
Ọ bụrụ na ị na-agbake n’ọrịa, otu ihe na-enyere gị aka bụ ibi ezigbo ndụ nke ga-enyere gị aka ka ị ghara ịrịa ọzọ.
Ace nke Pentacles ghaghachite ihe Tarot Card putara
Mgbe kaadị tarot nke Ace nke Pentacles na-egosi onwe ya na agughari na tarot, ọ bụ iji chetara anyị na a na-enye onyinye dị nsọ na-enweghị atụ.
Ihe ịma aka bụ jiri ha mee ihe .
Ọ bụ ezie na cosmos na-emesapụ aka na onyinye ya na nduzi ya, ọ bụ gị ka ọ dị n'aka ime mkpebi ziri ezi. Kedu ka ị si eji nsogbu akụnụba ahụ, ohere ọrụ ndị ahụ, yana ụdị ahụike ahụ? Na-alaghachi n'omume mbibi (onwe) nke ochie E kere ụmụ mmadụ ka ha nwee obi ụtọ, mana ị nwere nghọta doro anya nke ihe obi ụtọ bụ n'ezie?
Mgbe a tụgharịrị, kaadị tarot nke Ace nke Pentacles na-egosi nrụrụ aka n'ụzọ ị na-esi eji akụ gị. Rịba ama na mgbe kaadị a gbanwere, a na-agbanwekwa pentagram ahụ. Onye ama ama nke anwansi Eliphas Levi kọwara na mgbe o ziri ezi, Ihe anọ - Wa , Mmiri , Ọkụ , na Ikuku - bụ ndị na-achịkwa ya Mmụọ , ọgụgụ isi nke Chineke. Agbanyeghị, mgbe agbanwere ya, ihe ndị ọzọ mebiri nduzi ọma ya.
Kama inyere gị aka, ọganiihu nke ihe onwunwe gị na-enyere gị aka itinye aka na omume ụfọdụ adịghị mma. Ndị a nwere ike ịgụnye iribiga nri ókè, ịpụbiga mmanya ókè, ị bụbiga mmanya ókè, na ịkpa àgwà ọjọọ.
Ikekwe, ihe ịga nke ọma gị abanyela n'isi gị, ị na-eche na ị nwere ikike ugbu a ịtụ ndị na-adabere na gị ụjọ - ma ọ bụ na ị nwekwaghị mmetụta ọ bụla igosipụta ọmịiko n'ebe ndị ọzọ nọ.
Ga n'ihu n'okporo ụzọ a ga-eme ka ị ghara inwe mmetụta kachasị mma n'ikpeazụ. Na nke kachasị njọ, ọ nwere ike ibute mmebi gị, yana ka ị na-arịgo elu, ọ ga-esi ike ọdịda ahụ. Site na ndi omekome n’okporo uzo rue ndi ojoo ojoo, akuko juputara na ihe omuma atu nke ndi mmadu ndi gbachiri uzo ha n’elu nri nri, ma bia na njedebe di egwu.
Ihe omumu a abughi ihe ndi mmadu ghotara onwe ya, kama icheta na ezi obi uto nke nadigide adigide na ikpori ndu n'ihe nile.
Kedu ihe afọ agụ owuru pụtara
Ihe ndi ozo nke Pentacles Tarot Card Metaphysical Corcepts:
Ihe mmewere : Wa
Ihe ịrịba ama Zodiac Capricorn , Taurus , Virgo
Kristal na-agwọ ọrịa Amethyst , Nkume ọbara , Emerald
Ace nke Pentacles Card na Tarot Numerology
Ace bu kaadi mbu n’ime Suit nke Pentacle. Na Minor Arcana, ndị Nọmba 1 na-anọchite anya mkpali ma ọ bụ mmegharị mbụ nke mmewere nke ụwa.
N’ebe a, o bu nkpuru ma obu ntoala nke ihe nile metutara idi adi nke ihe na obi uto anyi n’enweta site na ya.
Mụtakwuo maka nkà dị nsọ nke Nọmba . Jiri nke anyị Onye na-eme ihe onyo onyonyo ịchọta ihe gị Pzọ Ndụ , Mkpụrụ obi , Alitydị mmadụ , Ndakọrịta na Nọmba Ọrụ dị na otu ha nwere ike isi nyere aka melite akụkụ niile nke ndụ gị!
Virgo man na aquarius nwanyi di na akwa
nwoke ais nwanyi buru nwanyi n’elu akwa
kedu ụwa kacha nso nso na anyanwụ
pisces nwoke na akwa na nwanyi scorpio